AfricaCom 2018 မှာ IMT Vislink နှင့် SpacePath Co-ပြကွက် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိသည်။ NAB ပြရန်, NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ထုတ်လုပ်သူ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်လွှင့်
Home » သတင်း » AfricaCom 2018 မှာ IMT Vislink နှင့် SpacePath Co-ပြကွက်
AfricaCom 2018 မှာ IMT Vislink နှင့် SpacePath Co-ပြကွက်
Cape Town, တောင်အာဖရိက, နိုဝငျဘာ 7, 2018 - xG®နည်းပညာ, Inc ( "xG") (Nasdaq: အဘယ်သူ၏တံဆိပ်တွေကထုတ်လွှင့်, စစ်တပ်နှင့်အစိုးရစျေးကွက်များတွင်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည် XGTI, XGTIW), ၎င်း၏ IMT Vislink စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ SpacePath နှင့်အတူပူးတွဲပြကြောင်းကိုကြေညာ AfricaCom (ခန်းမ 4, F21 ရပ်)တိုက်ကြီးပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးနှင့်သြဇာအရှိဆုံးနည်းပညာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအဖြစ်အပျက်။ IMT Vislink င်း၏ထွန်း MSAT-120 ပြသနေသည် ဂြိုဟ်တု ဗီဒီယိုနှင့်ဒေတာများ terminal ကိုနှင့် ViewBack အနိမ့်အောင်းနေချိန် dual-ရုပ်သံလိုင်းမတူကွဲပြားမှုလက်ခံ-ဒီကုဒ်ဒါ, SpacePath High-ပါဝါ (HPAs) နှင့်အနိမ့်အာဏာကိုအစိုင်အခဲပြည်နယ်အာဏာကိုချဲ့စက်များ (SSPA / SSPBs) ၏အကွာအဝေးပြနေစဉ်။
"AfricaCom ကငါတို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်အဘို့ကြီးစွာသောပြပွဲစေသည်သောဆက်သွယ်မှုအခြေခံအဆောက်အဦများ, နှောင့်အယှက်နည်းပညာများ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အိုင်စီတီမဟာဗျူဟာစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်း 14,000 တက်ရောက်န်းကျင်အတူတူဆောင်တတ်၏ ဂြိုဟ်တု ဒေသခံစက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များများအတွက်ထုတ်ကုန်, "ဒါဝိဒျ Robin, IMT Vislink အဘို့ကို Global အရောင်းဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။ "Vislink တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူအဖြစ်ကာလကြာရှည်ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ် ဂြိုဟ်တု ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများနှင့်ထွန်းလိုင်းကိုရန်မကြာသေးမီ updates များကိုအတူ, ဒီစျေးကွက်အဘို့, စွယ်စုံကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်များကိုဆက်လက်။ SpacePath နှင့်အတူပူးတွဲပြခြင်းအားဖြင့်, ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွန်း MSAT-120 အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးတွဲထုတ်ကုန်ပူဇော်သက္ကာကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည် ဂြိုဟ်တု ဂိတ်။"
ထွန်း MSAT-120 အလွန်ခရီးဆောင်ပေါ့ပါး, tri-band ဖြစ်ပါတယ် ဂြိုဟ်တု အဖြစ်အနည်းငယ်သာငါးခုအဖြစ်မိနစ်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ Non-လုံခြုံဒေတာနှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ပေးဘယ်နေရာမှာမဆိုဖွင့်လှစ်နိုင် terminal ကို။ ဒါဟာအားလုံးအချိန်များတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလွှမ်းခြုံသေချာ X-, Ku- နှင့် Ka-band configurations ထောက်ခံပါတယ်။ တစ်ဦး 65, 90 သို့မဟုတ် 120cm ရောင်ပြန်နှင့်အတူရရှိနိုင်သော, စနစ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် enviroments မှာလျင်မြန်စွာဖြန့်ကျက်ဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်နှင့်အဓိကပါဝါသို့မဟုတ်ဘက်ထရီစစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူသုံးနိုင်တယ်။
SpacePath ရဲ့, ထွန်း MSAT-120 terminal ကိုထည့်သွင်း 60W 13.75-14.50GHz SSPA ပြပွဲမှာသရုပ်ပြလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင် SpacePath အသစ်တခုပြင်ပတွင် 12W 13.75-14.50GHz ပန်ကာမပါ SSPB စတင်ပါလိမ့်မည်။ ထုတ်ကုန်များ၏ဆောက်လုပ်ရေးမရှိပရိတ်သတ်တွေရှိခြင်း, သစ်ကိုပန်ကာမပါ SSPB ယင်းယူနစ်များ၏ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရတိုးပွါးခြင်းနှင့်ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့မဆိုလိုအပ် minimize လုပ်။ ကို C, ကူ, DBS နှင့် Ka တူသော uplink ခညျြအနှောအဖြစ်ကောင်းစွာခင်းကျင်းပြသပါလိမ့်မည်ပါဝင်သည်ထားတဲ့ High-အာဏာနှင့်အနိမ့်အာဏာကိုအစိုင်အခဲပြည်နယ်အာဏာကိုချဲ့စက်များ၏ SpacePath ရဲ့အကွာအဝေး။
"ဒီဖြစ်ရပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အတခုအဖြစ်တစ်မူထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ ဂြိုဟ်တု အသံချဲ့စက်ထုတ်ကုန်များနှင့် sub-စနစ်များကိုဒေသတွင်းမှ, "ဖြစ်သူ Colin ဘော်လ်တန်, SpacePath ဆက်သွယ်ရေးမှာဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။ "IMT Vislink နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းနှစ်ဦးစလုံးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကို leverages ။ "
အဆိုပါ Vislink ViewBack နောက်ကျောကင်မရာအော်ပရေတာမှပြန်လာစတူဒီယိုကိုဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်၏ဧည့်ခံသည်အဓိကအားဖြင့်ရည်ရွယ်ပေါ့ပါး low-ပါဝါ, Low-အောင်းနေချိန်, Dual-ရုပ်သံလိုင်းမတူကွဲပြားမှုလက်ခံ-ဒီကုဒ်ဒါဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 2GHz-လိုင်စင်ရတီးဝိုင်းထဲမှာလည်ပတ်, အလက်ခံ Low-အောင်းနေချိန် H.264 ဒီကုဒ်ဒါအပွငျ Vislink ရဲ့စီးပွားဖြစ်ကြံ့ခိုင် LMS-T က demodulation ထောက်ခံပါတယ်။ ရလဒျမြားပါဝငျ HDMI နှင့် HDSDI, switchable ဖြစ်ခြင်းအဆုံးစွန်သော, ကြိုးမဲ့ကင်မရာ application များအတွက်ဒေသခံကင်မရာအကြားဗီဒီယိုနှင့်ပြန်လာဗီဒီယိုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
IMT Vislink နှင့် SpacePath အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, AfricaCom သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခရီးမှာရပ် F21 အားဖြင့်ရပ်တန့် www.imt-solutions.com, www.vislink.com/ or www.space-path.com/.
xG နည်းပညာ, Inc အကြောင်း
xG နည်းပညာရဲ့အမှတ်တံဆိပ်စိန်ခေါ်မှု enviroments မှာအသုံးပြုမှုအဘို့, တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစျေးကွက်ထုတ်လွှင့်နှင့်ပုဂ္ဂလိကမိုဘိုင်းဘရော့ဒ်ဘန်းကွန်ယက်ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုကိုဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။ xG ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အစုစုကိုပေါင်းစည်းမိုက်ခရိုဝေ့ Technologies က (IMT), Vislink နှင့် xMax ပါဝင်သည်။
IMT နဲ့ Vislink, ဖမ်းယူထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လုံခြုံစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အဆင့်မြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုက်ခရိုဝေ့စနစ်များ, အရည်အသွေးမြင့်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဗီဒီယိုဦးဆောင်ပေးသွင်းဖြစ်ကြသည်။ IMT နဲ့ Vislink ယင်းထုတ်လွှင့် / အားကစား / ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ဆင့်-1 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်ပေးသွင်းယုံကြည်စိတ်ချနှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေး public / ဘေးကင်းလုံခြုံမှု / ကာကွယ်ရေးစျေးကွက်နေကြသည်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး, တိုးချဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပ္ပံနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပုံစံအချက်များတည်ဆောက်, စွမ်းဆောင်ရည်, ယုံကြည်စိတ်ချရမြင့်မားမှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ယင်းအသံလွှင့်, အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍများအတွက်, IMT နဲ့ Vislink ယုံကြည်စိတ်ချရသောတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်ရိုက်ကူးစုဆောင်းဖြန့်ဝေဖို့ high-definition ဆက်သွယ်ရေးလင့်များသည်။ အဆိုပါဥပဒေ, အများပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံမှု & ကာကွယ်ရေးစျေးကွက်မှာတော့ IMT နဲ့ Vislink လုံခြုံသောဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဒေသခံအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှမစ်ရှင်-ဝေဖန်ဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.imt-solutions.com နှင့် www.vislink.com.
xMax operating ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်းဆိုအတွက်မစ်ရှင်-စိတ်ချပါကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုကယ်တင်မယ့်လုံခြုံ, လျင်မြန်-အသုံးချမိုဘိုင်းဘရော့ဒ်ဘန်းစနစ်ဖြစ်သည်။ xMax အထူးသခန့်မှန်းရခက်အခြေအနေတွေနှင့်အရည်အခြေအနေများကာလအတွင်းအသုံးပြုရန်တစ်ဦး Expeditionary နှင့်အရေးပါဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုအဖြစ်အစေခံရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ဤသည်ကဘေးဥပဒ်ကိုတုံ့ပြန်မှု, အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး application များအတွက်ဆွဲဆောင်မှုဖြေရှင်းချက်စေသည်။ xMax အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကမှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.xgtechnology.com/system-overview/။ အထက်ပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်းများအပြင်, xG တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံဖက်ဒရယ်ကဏ္ဍအဖွဲ့ (xG ဖက်ဒရယ်) အမျိုးသားကာကွယ်ရေး, သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနများနှင့်အခြားဖက်ဒရယ်အဖွဲ့အစည်းများမှလာမယ့်မျိုးဆက်လှိုင်းခွဲဝေမှုဖြေရှင်းချက်ပေးအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ xG ဖက်ဒရယ်အကြောင်းကိုအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်မှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.xgtechnology.com/technology/xg-federal/.
Sarasota, Florida တွင်အခြေခံပြီး xG နည်းပညာ 100 ကျော်မူပိုင်ခွင့်များနှင့်ဆိုင်းငံ့မူပိုင် applications များရှိပါတယ်။ xG မှာ NASDAQ Capital ကိုစျေးကွက် (သင်္ကေတ: XGTI) ရက်နေ့တွင်စာရင်းတစ်ခုလူသိရှင်ကြားကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.xgtechnology.com.
လက်ရှိသို့မဟုတ်သမိုင်းဆိုင်ရာတကယ်တော့အပေါ်မှာအခြေခံကြသည်မဟုတ်ကြောင်းဤနေရာတွင်ပါရှိသောထုတ်ပြန်ချက်များသဘောသဘာဝအတွက်ရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေဖြစ်ကြပြီး 27 ၏ Securities မှအက်ဥပဒေပုဒ်မ 1933A နှင့် 21 ၏ Securities Exchange အက်ဥပဒေပုဒ်မ 1934E ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအတွင်းရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များပါဝင်သည်။ ထိုသို့သောရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များသည်၎င်း၏အနာဂတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရလဒ်များကို, စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်သိသိသာသာအန္တရာယ်များနှင့်မသေချာမရေရာမှုများပါဝင်ကြောင်းအခွင့်အလမ်းများအကြောင်းကိုကုမ္ပဏီရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုထင်ဟပ်။ ဤရွေ့ကားထုတ်ပြန်ချက်များ, ပူဇော်သက္ကာ၏ရည်ရွယ်အသုံးအနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်. ပူဇော်သက္ကာထဲကနေမဆိုရရှိသော၏ပူဇော်သက္ကာနှင့်အသုံးပြုမှုပိတ်ပွဲပါဝင်သည်ပေမယ်ထုတ်ပြန်ချက်များမှကန့်သတ်မထားပါ။ ဤနေရာတွင်သုံးတဲ့အခါစကားများ "မျှော်လင့်," "" ယုံကြည် "ခန့်မှန်းချက်", "လာမည့်", "အစီအစဉ်ကို", "ပစ်မှတ်", "" ရည်ရွယ် "နှင့်" မျှော်လင့်ထားနှင့်အလားတူအသုံးအနှုနျးမြားကိုသူတို့ xG နည်းပညာ, Inc မှဆက်စပ်အဖြစ် ၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများ, သို့မဟုတ်၎င်း၏စီမံခန့်ခွဲမှု, ထိုကဲ့သို့သောရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်နေကြသည်။ ဤရွေ့ကားရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များ, ကုမ္ပဏီမှလက်ရှိရရှိနိုင်သတင်းအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်အန္တရာယ်များ, မသေချာမရေရာမှုများနှင့်ထဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုရှိသူများအနေဖြင့်ရုပ်ပစ္စည်းကွဲပြားဖို့ကုမ္ပဏီ၏အမှန်တကယ်ရလဒ်များကို, စွမ်းဆောင်ရည်, အလားအလာများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းကိုအခြားအချက်များတစ်အရေအတွက်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြ၏ သို့မဟုတ်ဤရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များကဆိုလို။
Studio Technologies Offers Flex-Use Audio Resources with Model 5330 Interface - နိုဝင်ဘာလ 15, 2018
NUGEN Audio Announces New AMB Processor Enterprise Extension - နိုဝင်ဘာလ 13, 2018
Videographer Christian Sasse Takes Sound Shark Parabolic Microphone Around the World and Back Again - နိုဝင်ဘာလ 13, 2018
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ IMT Vislink လှံ & Arrows ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2018-11-07
ယခင်: EditShare မီဒီယာ Solutions ပါဝါနယူး LG U + သည် Entertainment ကယဇ်က "Show ကို"
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "AfricaCom 2018 မှာ IMT Vislink နှင့် SpacePath Co-ပြကွက်" ။ https://www.broadcastbeat.com/imt-vislink-and-spacepath-co-exhibit-at-africacom-2018/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။